အသက်ပေါင်းများစွာရင်းပြီးရလိုက်တဲ့ လောဘပေးတဲ့ သင်္ခန်းစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အသက်ပေါင်းများစွာရင်းပြီးရလိုက်တဲ့ လောဘပေးတဲ့ သင်္ခန်းစာ
အသက်ပေါင်းများစွာရင်းပြီးရလိုက်တဲ့ လောဘပေးတဲ့ သင်္ခန်းစာ
Posted by ဇွဲမာန်(အင်းဝ) on Nov 11, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
စာရေးသူရဲ့ဇာတိနယ်မြေဖြစ်သော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊ ကျွန်းလှမြို့၏မြောက်ဘက် ချပ်ကြီးဘူတာအ၀င်မိုင်တိုင်အမှတ်(၅၁၁/၈)နှင့်(၅၁၁/၁၃)ကြားအနီး
ဓါတ်ဆီ(၇)တွဲဒီဇယ်(၂) နှစ်တွဲပါ အမှတ်(၈၀၇)အဆန် ဆီတွဲရထားတစ်စီးဓါတ်ဆီတွဲနှစ်တွဲဘီးချော်တိမ်းမှောက်ကြောင်း
ရထားမှောက်သောကြောင့် ဓါတ်ဆီများမှာ လယ်ကွင်းပြင်သို့
စီးဆင်းယိုဖိတ်လာရာ ရွာသူရွာသားများက ဆီများကို ဗူးများ သံချောင်များ ခွက်များဖြင့်
အလုအယက် ခပ်ယူကြရာ လူများအုပ်အုပ်ကျက်ကျက်ဖြစ်လာကြောင်း ထိုသို့အလုအယက် ခပ်ယူနေကြရင်း တစ်နာရီခန့်ကြာသောအခါမီးလောင်စရာတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ဆီများမှာ
မီးဟုန်းဟုန်းထတောက်တော့ရာ ဆီကိုခပ်ယူနေကြသောလူများပါလောင်ကျွမ်းသောကြောင့် လူယောက်သုံးဆယ်ဝန်းကျင်
ခန့်သေဆုံးပြီး အယောက်တစ်ရာဝန်းကျင်မီးလောင်ဒဏ်ရာရကာ အရေးပေါ်ဆေးကုသယူနေရကြောင်းနှင့် သေဆုံးသူများမှာ အချို့ ပြာဖြစ်သွားပြီးအရိုးသာကျန်တော့ကြောင်း ရုပ်အလောင်းကျန်နေသောသူများမှာလဲ ဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားနိုင်အောင်
ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်ကြောင်း မနက်၁၀ နာရီခန့်မှစလောင်သောမီးဟာ ညနေပိုင်းလောက်မှ
မီးငြိမ်းသွားကြောင်း ထိန့်လန့်တုန်လှုပ်ခြောက်ချားဖွယ်ရာ ကြားသိလိုက်ရသည်။
မီးလောင်ပြင်မြင်ကွင်းက တကယ့်ပြာကျနေတဲ့လူတွေ ပြီးတော့ မီးမလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ သံပုန်းသံခွက်တွေ သေနေသူတွေကတုံးလုံးပက်လက်အရိုးစုတစ်ပျက် ဒဏ်ရာရသူတွေက မရှု့မလှ ပုံများကို ကြည့်ရင်စာရေးသူရဲ့ရင်ထဲစို့နစ်လာမိသလို။ အတွေးများကလည်းသံဝေဂများစွာကိုဦးတည်ခဲ့သည်။
အော်လူတွေ လူတွေ “အသွားမတော်တစ်လှမ်း အစားမတော်တစ်လုပ် ´´ဆိုတာကို မေ့ထားကြတယ်။ ´´သတိမမူ ဂူမမြင်´´ဆိုတာ မျိုးလိုအရာရာသတိမထားစဉ်းစားချင့်ချိန် ဉာဏ်ပညာနဲ့သုံးသပ်မှုနည်းကြတယ်။ ဖြစ်ချင်တာရချင်တာ
လုပ်ချင်တာကိုပဲဖျတ်ကနဲလုပ်တတ်ကြပြီး အလွယ်ရမယ် အလကားရမယ်ဆို ရေရှည်မတွေးအလေးမမူ
သူ့ထက်ငါပြိုင်ဆိုင်လုပ်တတ်ကြတယ်။ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့်ဆိုတာ မတွေးတော့ မဆင်ခြင်တတ်ကြဘူး။
ဒီအဖြစ်အပျက်လေး ကိုကောက်ချက်ချလိုက်တော့ အလွယ်ရချင်ခြင်း ရေဆာခိုခြင်း လောဘကြီးခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုစကားမျိုးမပြောသင့်ဘူးလို့ ယူဆမိပေမယ့် တကယ့်အမှန်က ဒီလောဘဦးစီးအလွယ်ကြိုက်ခြင်းတွေကြောင့်ဆိုတာ အသေအချာဖြစ်နေလို့ သေသူအတွက်ဝမ်းနည်းနေမယ့်အစား ကျန်သူအတွက်အကျိုးရှိသင်္ခန်းစာရစေချင်လို့ ပြောလိုက်ရတာပါ။
တကယ်လို့သာ စဉ်းစားဉာဏ်ရှိကြမည်ဆိုရင်။ နံပါတ်တစ် ဆီရထားတွဲချော်လို့ဆီတွေမှောက်တယ် မီးဘေးအန္တရယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီအတွက်ကြိုတင်ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်သလဲစဉ်းစားသင့်တယ်။
နံပါတ်နှစ် ဓါတ်ဆီဖြစ်စေ ဒီဇယ်ဖြစ်စေ ဆီဆိုတဲ့အမျိုးက မီးလောင်လွယ်တာကိုသတိထားပြီး မီးလောင်ကျွန်းစေတတ်သော ဆေးလိပ်အနီးအနားမှာသောက်ခြင်း ၊ ဟန်းဖုန်းများ အနီးနားမှာယူမသွားခြင်းပြုလုပ်သင့်တယ်။
ခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဟ ဆီရထားမှောက်လို့တဲ့ဟ ဖိတ်ကျကုန်တယ်ဆီတွေနှမျှောစရာ ရှိရာဗူးခွက်တွေယူပြီးသွားခပ်ကြဆိုပြီးပြီးသူ့ထက်ငါ အလုအယက်ခပ်ယူကြတော့ မီးခြစ်ပါလာသူရှိကောင်းရှိမယ် ဟန်းဆက်ပါလာသူရှိကောင်းရှိမယ် ဆေးလိပ်သောက်ရင်းဆီခပ်သူရှိကောင်းရှိမယ် ။နောက်ယူလာတဲ့ထဲမှာ ဗူးတွေထဲမှာက
စားဆီထည့်ထားတာ မျိုးအစရှိတဲ့ ဆီပေါင်းရေပေါင်းများစွာထည့်အသုံးပြုထားတာတွေရှိတယ်။ ဓါတ်ဆီ၊ဒီဇယ်ဆိုတဲ့အမျိုးက
မတည့်တဲ့ဆီနဲ့တွေ့ရင် မီးထတောက်လောင်တတ်တာ သတိထားရမယ်။ရေကြီးသုပ်ပြာခပ်ကြတော့ဘယ်သူမှ ဗူးတွေကို
ထင်တယ်အဲဒီအချိန် သူတို့စိတ်ထဲ မီးလောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှတွေးမိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆီတွေကိုမရလိုက်မှာဆိုတဲ့ပူပင်သောက၊ ဆီတွေကိုရချင်လွန်တဲ့လောဘတွေကြောင့် ဆီခပ်ယူထည့်ဖို့ရာပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေလိမ့်မယ်။
ဒီတော့လောဘကြောင့်သေရတယ် ။“လောဘကြောင့်သေ ငရဲပြည်´´ဆိုတဲ့ဆရာတော်တွေဟောတဲ့တရားအတိုင်းဆိုရင်သွားပြီ၊ ဒီလောဘကြောင့် အသက်နှင့်ခန္ဓာပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်လိုက်ကြရသလို ငရဲသို့လည်းခရီးဆက်ရဦးမလားတော့မပြောတတ်။
ဘယ်အလုပ်တိုင်းမဆို ဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့်မစဉ်းစာပဲ လောဘကိုဦးတည် ဖြစ်ချင်တာကို အသားပေးလုပ်မိရင် ဒီမီးလောင်းပျက်စီးရခြင်းမျိုးလိုပဲ တကယ်ကိုဘ၀တွေနာကြရလိမ့်ဦးမယ်။ ဒီတော့
ဆိုတဲ့ပညာရှိတို့စကားလေးလို ဒီတစ်ခါတွေ့လိုက်ရတဲ့ အမှားကြောင့်လူပေါင်းများစွာရက်အသက်တွေကိုပေးဆပ်လိုက်ရတာ ကိုသင်္ခန်းစာယူပြီး နောင်အမှားမတွေ့ရအောင် (အချောင်ရလို)အလွယ်ရလိုတဲ့လောဘ ၊ ဖြစ်ချင်တာကိုဇွတ်လုပ်တတ်တဲ့ဗီဇ တွေကို ဖျောက်ပစ်ဖို့လိုပါပြီ။ ဆီတွေအလကားရမယ် တို့မိသားစုလေးအတွက် အသာနေရင်း ၀င်ငွေရမယ်။ ဆိုတဲ့ ပျော်စရာအတွေးဟာ ဆင်ခြင်ဉာဏ်နည်းပါးခြင်းကြောင့် ကြေကွဲစရာမိသားစုလေးတွေဖြစ်ခဲ့ရရှာတယ်။
အလုပ်တစ်ခု လုပ်မယ်ဆိုရင် ရလွယ်ဖြစ်လွယ်တဲ့လောဘကိုဦးမတည်သင့်ပဲ အချောင်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဖျောက်၊
ဖြစ်နိုင်ချေနှင့်ဖြစ်နိုင်တာကို စဉ်းစားဆင်ခြင်၊ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကိုဦးတည်ဖြစ်နေတာကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး သုံးသပ်ချင့်ချိန်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာလေးရှိသင့်တယ်ဆိုတာ အသက်ပေါင်းများစွာပေးပြီးရလိုက်တဲ့ ဒီသင်္ခန်းစာလေးရအောင်ယူသင့်လှပါတယ်။
အမှားနှင့်အမှန် ဝေဖန်ခွဲခြား စုံစမ်းသူအလွန်ရှား၏
စုံစမ်းစေကာမူ အမှန်အမှား ခွဲခြားသိမြင်သူရှား၏
ပြောနိုင်စေဦး အမှားကိုစွန့်၍ အမှန်ကိုကျင့်သူရှား၏ ဆိုတဲ့ ဆုံးမစကားလေးတွေအတိုင်း
စာရေးသူအပါအ၀င် လူတိုင်းဟာ အမှန်အမှား ခွဲခြားချင့်ချိန်ပြောဆို လုပ်ကိုင်နိုင်သူအလွန်ရှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မလုပ်လို့လဲမရပါဘူး။ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းမရှိ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိပြန်ရင် ဒီလို ရင်နာစရာအဖြစ်မျိုးတွေက နောက်လဲကြုံနေရဦးမှာပါ။
လောဘသည် အငတ်ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်တီး တတ်သည်။ဆိုတဲ့ဘုရားဟောလို လောဘဦးစီးပြီး အမှားအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားမကျင့်ကြံပဲ တရားသည်မတရားသည်မသိလုပ်ကိုင်က သူ့ထက်ငါ ပြိုင်ဆိုင်ကြ မာန်ထောင်ကြမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာအ၀ှမ်းအမြဲသွေးချောင်းစီးပြီး မငြိမ်းမချမ်းနဲ့ ငတ်ကြပြတ်ကြနဲ့နေရဦးမှာပါလားဆိုတာ သတိထားပြီးကြပြီး အချောင်ကြိုက် အလွယ်လိုက် လောဘမိုက်ကို မွေးကြတဲ့ အကျင့်တွေဖျောက်ပယ်နိုင်ကြပါစေ။
မှတ်ချက်= ဤပိုစ့်သည် ဆုံဆည်းရာဆိုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြည်သည် မူရင်းလင့်ခ်ကိုလေးလမ်ညွှန်လိုက်တယ်နော်…
မှတ်ချက်= ဤပိုစ့်သည် ဆုံဆည်းရာဆိုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြသည် မူရင်းလင့်ခ်ကိုလေးလမ်ညွှန်လိုက်တယ်နော်…
ဒီသတင်း ဖတ်ပြီး တည်း က နိုင်ငံ တကာက လူတွေ ကတော့ မြန် မာပြည်သားတွေ တော်တော် အသိညဏ် နည်း တယ် လို့ ကဲ့ရဲ့ ကြ မှာ ပဲ လို့ တွေး မိမယ်။ ဓါတ်ဆီ ၊ ဒီ ဇယ် ဆို တာ မီးလောင် ပေါက်ကွဲ လွယ် တယ် ဆိုတာသတိ မပြု မိလောက် အောင် ကို အချောင် ရ လို စိတ် အား ကြီး နေကြတဲ့ သေဆုံး ဒဏ်ရာ ရ သူတွေ ကို ဂရု ဏာ ဒေါသ ဖြစ်မိတယ်။
အခု ဟာ က လူ အများ စု ဆိုတော့ ဆင်း ရဲ သားတွေ ချည်း မဟုတ်လောက်ဘူး။ ဆင်း ရဲ လို့ အလကား ရတာတွေ အပြေး အလွှား ယူကြတဲ့ သူတွေ အပြင် အိမ် က ဆိုင် ကယ် အတွက် ဆီ ၀ယ် ရ သက်သာ မနည်း ဘူး ဆိုပြီး လာခပ်တဲ့ သူတွေ လည်း ပါလောက်တယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မသေသင့် ပဲ သေသွားတဲ့ အသက်ပေါင်း များ စွာ နဲ့ ရင်း ပြီး သင်ခန်း စာ ပေးသွား တာ ပါပဲ။
အညာကလူတွေမှတ်သားသင့်နေပြီနော် အရင်က ပခုက္ကူဘက်မှာ တခါဖြစ်ဖူးသေးတယ်ထင်တယ်။
မီးလောင်တာပဲ သေလိုက်တာသောက်သောက်လဲ အခုလိုဆီခပ်ကြတာပဲလေ..။
နောက်တခါထပ်ဖြစ်ရင်တော့ ညံ့လွန်းလို့ လောဘကြီးပြီး အသိဥာဏ်နဲကြလို့ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းနိမ့်ကြတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ပြီး သနားမနေတော့ဘူး..။ အခုအထိတော့ဂရုဏာဒေါသလေးနဲ့တော့သနားနေမိနေသေးတယ်။
မရွှေကြည် ပြောသလို ပခုက္ကူဘက်မှာလဲ တစ်ခါဖြစ်ဘူးတယ် အဲဒီတုန်းက ရေနံပိုက်လိုင်းပေါက်တာကို ၀ိုင်းခပ်ကြတာ ခပ်နေရင်းမှ မီးလောင်တာ
လူလဲ တော်တော်သေသွားတယ် ၊
တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာပေးမှုတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်သင့်နေပြီ….
အပေါ်ကသတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထပ်တက်လာတာတွေထဲက သတိထားမိတာ..
“””“မီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် လူနာများ၏ အသက်အန္တရယ်ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရန်အတွက် Drip ပုလင်းများအပြင် အရည်အသွေးကောင်း မွန်သော ဆေးဝါးများကို ယခုချိန်တွင်မဖြစ်မနေအသုံးပြုရန် လိုအပ်လျှက်ရှိကြောင်း””””””””
ချပ်ကြီးဘူတာတွင် ယမန်နေ့က ဆီတွဲတိမ်းမှောက် မီးလောင်မှုတွင် ဒဏ်ရာရှိခဲ့သော လူနာ၈၆ဦးမှာ ကန့်ဘလူဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိနေပြီး ၅၀ရာခိုင်နှုန်းမှာ စိုးရိမ်ဖွယ်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း လူနာများအတွက် တစ်ရက်လျှင် Drip (R/Lနှင့်N/S)၊ပုလင်းပေါင်း ၂၅၀၀ခန့် မဖြစ်မနေသုံးစွဲရမည်ဟုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်နေသူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ဟန်ကပြောကြားသည်။
“မီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် လူနာများ၏ အသက်အန္တရယ်ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရန်အတွက် Drip ပုလင်းများအပြင် အရည်အသွေးကောင်း မွန်သော ဆေးဝါးများကို ယခုချိန်တွင်မဖြစ်မနေအသုံးပြုရန် လိုအပ်လျှက်ရှိကြောင်း” ၄င်းကဆက်လက်ပြော ကြားသည်။ဆီတွဲမီးလောင်မှုကြောင့် ကန့်ဘလူဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိလာသော လူနာ၈၆ဦးအနက် ၁၈ဦးမှာဆိုးရိမ် ဖွယ်ရာအခြေအနေရှိကြောင်း အထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးကပြောကြားသည်။
လူနာအများစုမှာ ခန္ဒာကိုယ်၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထက် မီးလောင်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီး ဆေးကုသနိုင်မှုကြောင့် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ သူများမှာလဲ ခန္ဒာကိုယ်ပြန်လည်သန်စွမ်း ကြံခိုင်ရေးကို ကာလကြာရှည်ကုသ ရဖွယ်ရှိကြောင်း ၄င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
လူနာများအား အရေးပေါ်ဆေးကုသရေးလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ရွှေဘို၊စစ်ကိုင်း၊မုံရွာ မြို့ကြီးများမှ အထူးကုဆရာဝန်နှင့်သူနာပြု များရောက်ရှိနေပြီး၊ မန္တလေးအထွေထွေ ရောဂါကုဆေးရုံကြီးမှ မျက်နှာနှင့် မေးရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာကြီးများ သူနာပြုများ နိုဝင်ဘာ၁၁ရက် နေ့တွင်ထပ်မံရောက်ရှိ လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကန့်ဘလူဆေးရုံအုပ်ကြီးက ပြောကြားသည်။
ဂရုဏာဒေါသောလည်း ဖြစ်မိတယ်…. နွေရာသီ နေပူပူမှာ လောင်စာဆီအလုအယက်ခပ်နေတဲ့ လူတွေကို သနားလည်း သနားတယ်..ဒေါသလည်း ထွက်မိတယ်… ရွာလူကြီးတွေက ဘာမှ မပြောဘူးလား…
သတင်းဖတ်လိုက်ရတုန်းက ဒီလောက်ထိဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်။ ခုမှသေချာသိလိုက်ရတယ်။ အယောက်၃၀ တောင်သေတာကိုး။ အသိဥာဏ်ကိုဖုံးအုပ်သွားတဲ့လောဘ အသက်ပါပေးလိုက်ကြရတာပေါ့။
“ဟေး ဟိုမှာဆီသယ်ရထားမှောက်လို့ဟေ့” ဆိုရင် ဘာကိုအရင်ဦးဆုံးလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့စိတ်ဓါတ်။ ကိုယ်ရဖို့တစ်ခုထဲသိပြီး တစ်ယောက်လုပ်ရင် အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးအလုအယက် လုပ်ကြလို့သေကြ ကျေကြ တွေဖြစ်ကြရပြီ။
သေဆုံး သွားတဲ့သူတွေအတွက်အလွန်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်တဲ့ လောဘမျိုးရှိကြရင် သိပ်ကောင်းမယ်
လောဘ က အတော် ကြောက်စရာ ကောင်းသား …
လောဘ ကြောင့် အသက်အိုးအိမ်တွေ ပျက်စီးရတယ် …
လောဘ – လိုချင်တပ်မက်မှု၊ ဒေါသ – အမျက်ဒေါသ၊ မောဟ – တွေဝေမှု တွေကြောင့် အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေ ပျက်စီးရတဲ့အထိ ဖြစ်ရတယ် …..
တရားကျစရာ ပါပေ ……..
လောဘနဲ့ သေရင် ပြိတ္တာဘုံဘဝ ရောက်ရတယ် ..
ဒေါသနဲ့ သေရင် ငရဲဘုံကို ရောက်ရတယ် …
မောဟနဲ့ သေရင်တော့ဖြင့် တိရစ္ဆာန်ဘုံကို ရောက်ရတယ်လို့တော့ ကြားဖူးနားဝ ရှိပါရဲ့ ……။
စ၀င်ဝင်ချင်း ငလျင် ဖတ်မိတယ်..
ဒီကိစ္စကျတော့ … အသေခံရကျိုးမနပ်ဘူးပေါ့..နော….
ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့အရင်းအနှီးက မသက်သာဘူး ……..
ရေနံပိုက်လိုင်းပေါက်တုန်းက တစ်ခါ သေခဲ့ကြသေးတာကလား
ရေနံပိုက်လိုင်းနားနဲ့၊ အခုလို သံလမ်းအနား ကျေးရွာနေသူတွေကို ပညာပေးရှင်းပြဖို့ တော့ လိုနေပါပြီ
ကျုပ်ကတော့ အထက်က ဆွေခုနှစ်ဆက်မျိုးခုနှစ်စားမကုန်အောင် စားပိုးနင့်အောင် မျိုထားတဲ့ ဟာကြီးတွေပဲပြောချင်တယ်… အသိဥာဏ်ဖွင့်ပေးရင် သူတို့ကိုပြန်တော်လှန်မှာစိုးလို့ ပညာရေးဌာနဆိုတာ အနှိမ်အခံရဆုံး၊ အဆင်းရဲဆုံး ၀န်ကြီးဌာနပါ..
ကိုယ်ပြုသောကံ ကိုယ့်ထံပြန်လာရင်သာ အလှဲ့ကြ မနွဲ့ကြနဲ့ပေါ့….
အမှန်ကတော့ လောဘကြောင့် အသက်ပေးလိုက်ရတာပါဘဲ။
ရထားတွဲ ဘာကြောင့်မှောက်သလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတယ် …
ကျွန်မနားလည်ထားသလောက် အရည်ဆိုတာ အပြည့်ဖြည့်ထားရင် ပြသနာသိပ်မရှိပေမယ့် အပြည့်မဟုတ်ရင် free surface effect ရှိတယ် … ရထားသံလမ်းက အငြိမ်မဟုတ်တော့ ….